Dulucda Ducada iyo Lifaaqeeda | Doodwadaag waa Danwadaag.
Dulucda Ducada iyo Lifaaqeeda
Ducada kore, waa mid aad u wanaagsan, waxayna u badatahay inaan dhamaanteen wada naqaan maadaama aan wada nahay Xisnu-muslim luga leh oo socda, oo dhankaa cabsi kama qabo, balse cabsidayda ugu wayn waa arrimaha la xiriira fahanka dulucda Ducada:
Aragtida aanu ka haysanno ducadu waa inay sharta naga xijaabto iyo dadka xunxun darbi nooga noqoto, sidaana aan ugu noolaanno nabad joogto ah. Waxaase baryo kasta oo aan Alle ka barinno wax, waxaa daba socda, dhankeenna waajibaad lay naga doonayo, si ducadaa u hirgasho ama Alle u aqbalo.
Ducada ah in Alle ku siiyo nabad, waxaa la socda shardi ah inaad adigu nabad ku noolaato, si nabad ahna aad u dhaqanto, markaa ayaad rajayn kartaa inaad nabad hesho am aka ammaan hesho dadka kale, haddiise aad adiga fowdo, deggenaasho la’aan iyo nabad darri ka shaqayso, waxaa hubaal ah in ducadaadu noqonayso “Iga dheh ama ii dheh).
Waxaan maalin dhawayd aad ugu baraarugay duco dhahaysa:
“خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ”.
Ducadaa waa tan la akhriyo marka aad guriga ka baxayso. Waxay isugu jirtaa Eebbe ka magan gelayso inaad lunto, sinbirixooto, dulmiso iyo inaan u dhaqanno si badawnimo ku jirto. Dhanka kale waxaan Alle waydiisanaynaa inaan annagana uusan Alle nala kulansiin dad waxaa sameeya.
Sid aka muuqata ducada, waxay ku billaabanaysaa in marka hore annaga na laga doonayo inaan ka soo dhalaalno masuuliyadda ah inaan annagu samayn dhibkaa afarta ah, taa waxaa ka dhalanaysa inaan annagana aanan la kulmin. Haddiise, ducada aanu kor ka akhrinno, annaga oo aan feejignayn, qofka ugu horreeya ee aan jidka kula kulanno aan dulminno, kana an shaqada ugu tagnana aanu ku gafno, kan maqaaxida nala fariistana aanu si ay badawnimo ku dheehan tahay aanu u la hadalno, markaa waxaa hubaal ah, inaanu markasta aanu guranayno waxa aan beeranayno.
Ducadu waxay leedahay labo dhan, dhan adiga ku khuseeya, waxa lagaa doonayo iyo dhan Alle aad wax warsanayso. Aanu iska giijinno waxyaabaha na khuseeya. Si guud waxyaabaha ina khuseeya waxaa kamid ah inaanu cunno risqi xalaal ah oo aadan calool xaaraam ku jiro aadan Alle la hortagin, isla markaana aadan rajayn in ducada la aqbalayo.
Maalmahan waxaa bilaabatay in la isku sakhraamiyo, ducadaa akhriso waxaas haddaad isku aragto, mayee taa akhri haddii aad waxaa dareento, taana ku dar, haddii aad xanuunkaa isku aragto. Taasi waxay ducada ka saaraysaa hadafkii loogu talo galay oo ahaa inay adiga ku wanaajiso, dadka kalena wanaajiso, waxayna isu beddelaysaa ama booskiisa galaysaa kaniiniyada iyo daooyinka takhaatiirta qoraan. Waana masiibada hadda ina haysataa. Takhtarkiina nooma dhaqna, ducana warkeeda daa.
Waxaa naftayda u sheegayaa, xasuusinayaa walaalaha dhammaan inaanu ka fakirno, inta aan ducaysanin ka hor, ducada waxa ku lifaaqan, si aanu u helno dallacsiin iyo aqbalaad.
WQ C/raxiim C. Shaafici